Finaritra andiany lehibe tsy fantatra Netflix izay hampifandray anao | Famoronana an-tserasera
Sambatra ny andiana polisy, andian-dehilahy tsara sy olon-dratsy, andiany misy unicorn ho sakaizan'ny mpitsikilo lehibe, 100% tokoa amin'ity andiany ity no ahitanao mpitsongo tsy mahazatra izay mitady hanatanteraka ny fahamarinana ao amin'ny ny vidiny rehetra nefa tsy mampaninona anao ny mandika lalàna na lalàna hafa. Ity mpitsongo mpitsikilo taloha ity, mpidoroka amin'ny alikaola sy akora hafa, dia hihaona amin'ny namana eritreritra iray antsoina hoe Happy izay hivelomany amin'ny karazan'adala rehetra eo am-piadiana amin'ny asan-jiolahy.
Izy io dia andiany misy hatsarana masiaka nefa tena izy izay mitantana anao hitarika anao tanteraka amin'ny tantara lehibe indrindra noho ny fikasihan'ny vazivazy mainty sy ny hadalan'ny toetran'ny sary an-tsaina ilay mpilalao sarimihetsika, namana an-tsary unicorn an'ny zazavavy iray nalaina an-keriny tao anaty firaisana tsikombakomba mahatsiravina.
Raha tianao ny andian-tantara tsy mahazatra sy ny vazivazy mainty dia tsy isalasalana fa ity andiany ity izay hampifandray anao amin'ny minitra 1.
Tsy te hanao aho mpandroba, Aleo avelako ny tranofiara mba hahitan'ny tsirairay raha tiany izany.
Ity dia Faly ilay sakaizan'ny tovovavy protagonist an'ny andian-dahatsoratra, zavatra mahafatifaty izany satria io sary io no velona tamin'ity zazavavy ity nefa miaraka amin'izay dia mahafaty an-doha ity bibikely ity ary manao karazan-javatra adalana rehetra izay tsy tokony hanao zaza. Ny fanontaniana lehibe dia hoe maninona ny olon-dehibe no afaka mahita an'io raha tsy zaza intsony?
Amin'ny maha-cinephile tsara azy dia hitako ny andian-tantara Sambatra ary tsapako tamin'izany fotoana izany fa ny andian-tantara dia misy firesahana momba ny sanganasa audiovisual hafa izay ampiarahan'izy ireo ny vazivazy mainty sy ny fihetsiky ny hetsika, izany rehetra izany dia nandro tamin'ny tsy ara-potoana iray. Raha manapa-kevitra ny hijery ilay andian-dahatsoratra ihany ianao amin'ny farany ary maniry bebe kokoa dia manome torohevitra hafa aho.
Zombieland dia horonantsary iray izay mampifangaro ny fampihorohoroana ny zombies amin'ny fikitika ny vazivazy mainty izay lasa sangisangy tsotra ilay tsy maty.
Mpanjakan'ny vazivazy rehefa manapotika sy manapotika ny ratsy fanahy, Deadpool Ohatra iray amin'ny sarimihetsika mahatsikaiky miaraka amina vazivazy amin'ny endriny madio indrindra amin'ireo maherifo Marvel.
Ny horonantsary farany nanolorana azy ho manana fitoviana amin'ny andian-tantara Faly dia ny Crack Poison ao anaty ra, ity sarimihetsika ity dia avy amin'ny talen'ny andian-tantara Sambatra, mampifangaro tsara ny hetsika miaraka amin'ny fikasihana mainty sy zavatra adala izaitsizy izaitsizy izay hahafinaritra antsika rehetra minitra
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Finaritra andiany lehibe tsy fantatra Netflix